माहामारी कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसको बारेमा लोकेन्द्र बोगटीको अनुभव| Janachaso Khabar
माहामारी कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसको बारेमा लोकेन्द्र बोगटीको अनुभव
- लोकेन्द्र बोगटी
आज म बिश्वब्यापी फैलिएको माहामारी कोरोना (कोभिड-१९) भाइरसको बारेमा आफ्नो केहि बिचार राख्दै छु।
धेरै सतर्क रहँदारहदै पनि कोरोनाको दोस्रो लहर बाट म पनि अछुतो रहन सकिन । होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने मेरो कान्छो भाइलाई क्याम्पसले प्रयोगात्मक कक्षा लिनका लागि ग्याङ्न्टोक पठाएको थियो। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरले बिकारल रुप लिने संकेत पाएपछि सत्र (१७) दिनमै होटलले फर्काइदियो । कोठामा तीन (३) दिन बसेपछि मैले घरमा पठाइदिए। घरमा पुगेको दुई (२) दिन पछी भाइ बिरामी भयो । भलुवाहिमा झरेर भाइले केही दबाई प्रयोग गर्‍यो । भाई बिरामी भएको चार (४) दिन देखि बुबा र ममि पनि बिस्तारै बिरामी पर्न थाल्नु भयो । भाइलाई दबाइले काम नगरेपछि ममिले लिएर जिल्ला हस्पिटल आउनुभयो । ममि र भाइ दुबै जनालाई परिक्षण गरीयो । बुवाले कोरोनाको पनि परिक्षण गर्ने सल्लाह दिनुभएको थियो । डाक्टरलाई अनुरोध गर्दा कोरोनाको औषधी नबनेका कारण जचाएर खासै फरक नपर्ने आवश्यक औषधी लेखिदिएको बताउनुभयो । साथै उहाँलाई पनि पहिलो लहरमै लक्षण देखिएको र उहाँले नजचाई औषधी खाएर आराम गरेर निको भएको बताउनु भयो । त्यो दिन ढिला भएकोले ममि र भाइ कोठामै बस्नु भयो र भोलिपल्ट घरमा जानुभयो ।
दुई दिनपछी (बैशाख १२) बाट मलाई पनि आँखा र टाउको दुख्न सुरु गर्यो। हस्पिटलमै अलि असहज भएको महसुस भएको थियोे । म क्याम्पस आउने जाने गरीरहेकै थिए । बिस्तारै जरो आउने, जिउ गल्ने, पसिना आउने, जाडो हुने तथा सुख्खा खोकिले सताउन थाल्यो। आफुसँग भएको पैसा सक्किएको कारण केही साथी सँग सहयोग माग्दा असमर्थन जनाएपछी कोठामै आराम गरेर बसेँ। घरमा भाइलाई बिसेक नभएकोले भलुवाहीमा बुवाले लिएर जानुभयो । बुवा लाई केही औषधी दियो र भाइलाई टाइफाइड र निमोनियाको सम्भावना भन्दै पानी चढाउने, सुइ लगाउने तथा बाफ दिने कार्य सुरु भयो। हस्पिटल नगएको थाहा पाएपछि बुबाले मलाई गाली गर्नुभयो । सुतेको ठाउँबाट उठ्न पनि नसकिएला जस्तो भएपछि एक जना साथिको आर्थिक सहयोगमा अर्को सथिलाई लिन बोलाएर म सोह्र (१६) गते बेलुका जिल्ला हस्पिटल गएर चेक गराए। जरो तेतिधेरै नदेखिएकाले कोरोनानै भएपनि डराउनु नपर्ने भन्दै पिसिआर (pcr) नगराएपनि हुने डाक्टरले सल्लाह दिए। घरमा सबै बिरामी भएकोले र बुबाको दीर्घ रोगका कारण मलाई अलि डर लाग्यो। मैले हस्पिटलका अध्यक्ष सँग पिसिआर (pcr) जांच गराउन सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरे! उहाँँले सहयोग गर्ने बताउनु भयो । मैले फेसबुकमा केही स्टाटस लेखेको कारण अग्रज व्यक्तिहरूले सहानुभूति दिदै आर्थिक सहयोग गर्ने वचन ब्यक्त गर्नुभयो । सत्र (१७) गते बिहान् अध्यक्षले बोलाउनु भएको समयमा म हस्पिटल पुगे । मलाई उभिन गरो भएकोले जहाँतहि भुइँमा बसेको थिए । नाम दर्ता गराएकाले आफ्नो पालोमा म टेण्ट भित्र गए। प्रोटोकल अनुसार सय (१००) भन्दा तल जरो रहेकाले स्वाब लिन नमिल्ने जानकारि गराए। मलाई चित्त नबुझेकाले केही शब्द राख्दै जसरिनी लिन अनुरोध गरेपछि लिदेनुभयो।
अठार (१८) गते मेरो रिपोर्ट पोजेटिभ आएको जानकारी पाए। अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै होम आइसुलेसनमा बस्न अध्यक्षले अनुरोध गर्नुभयो । मैले मन्जुर गरे । धेरै निन्द्रा लाग्ने गरेकोमा राती बिउझिए । मेरो आँखा खुलेन ! कतै चरपटाउन सकिन ! धेरै कोसिसका बाबजुद बल्लतल्ल उठन सफल भए । जिउ थरर कापेको थियो। राती भएको कारण कसैलाई खबर गर्ने मन भएन। उज्यालो भएछी मलाई गरो भएको भन्दै अध्यक्ष सँग सहयोग मागे । उहाँले एम्बुलेन्स पठाइदिने जानकारी गराउनु भयो। बिस्तारै सबैले खबर भुझ्न थाल्नु भयो। कति फोन उठाउन सकिन मेसेजको प्रतिक्रिया दिन सकिन सबैसँग क्षमाप्रार्थी छु। एम्बुलेन्स आउन अलि ढिलो भएपछि उन्नाइस (१९) गते साझ परेपछि म हस्पिटलको कोभिड वार्ड (covid ward) मा भर्ना भए । बाईस (२२) गतेसम्म अक्सिजन दिनुपर्यो। यो बिचमानै बुवालाई गाह्रो भएकाले नेताहरूको सहयोगमा जिल्ला हस्पिटल ल्याउनु पर्यो। दुई दिन बाफ दिएर केही औषधी दिदै स्वाब लिएर हस्पिटल बाट डिस्चार्ज गरीदियो। बुबा घर पुग्नु भएको दुई (२) दिन पछी बुबाको रिपोर्ट पनि पोजेटिभ आयो।
बाईस गतेनै अक्सिजन छुटेपछि हस्पिटलले मलाई डिस्चार्ज गर्न खोज्यो मैले असुइकार गरीदिए। तेईस (२३) गते माथी कोभिड अस्पतालमा सिफ्ट गरीयो । अक्सिजन लगाउन्जेल केही खादा उल्टि हुने गरेपनि अक्सिजन निकालिसकेपछी सहज हुदै गरेको थियोे । अब बाँकी मसँग खोकी, जिउ गल्ने र धेरै निन्द्रा लाग्ने मुख्य समस्या थियो। बुबाले राती धेरै छाती दुखेकाले हस्पिटल आउने बताउनु भयो, मैले हस्पिटलको बातावरण राम्रोसँग बुझिसकेकाले नआउनु भनी अनुरोध गरे। फेरी मलाई पच्चीस (२५) गते डिस्चार्ज गराउने कुरा गर्दै मलाई आफन्त बोलाउन अनुरोध गरे। मेरो घर हिड्नु पर्ने र कोठामा विविध समस्या भएकोले मैले अस्वीकार गरीदिए। पछि अध्यक्षले उसको आफन्त म हुँ भन्नू भएपछि मैले केही बोल्न सकिन र डिस्चार्ज पत्र लिएर कोठामा आए। त्यसपछिको घटनाक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकार हुनुहुन्छ नै। म फेरी पच्चीस (२५) गतेदेखि एक (१) गतेसम्म पिसिआर चेक हुने आशामा कोभिड हस्पिटलमा बसे । केहि गरी पिसिआर चेक नुहुने भएपछि म एक (१) गते एम्बुलेन्सम घर गए।
पिसिआर चेक नगरीएको भाइ र ममिलाई बिसेक भइसकेको थियो। बुबालाई छाती दुख्ने र जिउ गल्ने बाँकी थियो । बुबा घरिनघरी जरो जाँचिरहनु हुन्थ्यो। एम्बुलेन्सले गागनमा छाडिदिएपछी म हिँड्न थाले लगभग पाँच (५) मिनेट हिडेपछी मेरो शरीरमा काम छुट्यो, म हिँड्न नसक्ने भए। पछी ट्याक्टरको सहाएताले घरमा पुगे। कोरोनाको सन्दर्भमा सबैको मन मस्तिष्क बास भइसकेको छ। मेरो परिवारमा पनि पहिलेको जस्तो केही थिएन। पहिलोपटक मलाई घर घर जस्तो नभएको महसुस भयो। मैले कोरोना प्रतिको मानसिकता परिवर्तन नगराए मेरो परिवारमा अन्य घट्ना घट्न सक्ने महसुस गरे। विस्तारै मैले घरमा पहिलेको नै वातावरण बनाउन सफल भए। म नौ (९) गते फेरी सदरमुकाम आइसकेको छु। अहिले सबैजना कोरोना जित्न सफल भैसकेको छौँ।
यो बीचमा सहयोग गर्नुहुने सहयोगी हातहरूप्रति म ऋणि छु! उच्च मनोबल बनाउन हौसला प्रदान गर्नुहुने, स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने, भेट्न तथा खबर बुझ्न आउनुहुने सम्पुर्ण प्रती हृदयदेखिनै आभार प्रकट गर्दछु। आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि मैले कसैलाई असर पुग्ने कार्य गरेको भए अनादर शब्दको प्रयोग गरेको भए क्षमा प्राथी छु।
कोरोना माहामारिको विषयमा विभिन्न खाले कुराहरू सुन्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका सबै कुरा सत्य नहुन सक्छ। सबैभन्दा पहिले वास्तविकता थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। कोरोनाको औषधी बनिसकेको छैन । भ्याक्सिन लाउँदैमा कोरोना नलाग्ने हैन। भ्याक्सिनले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताम वृद्धि गर्ने हो। हुनत तेस्रो लहरसम्म कोरोनाबाट कोहि पनि अछुतो नरहन सक्छन् । तर पनि कोरोना लाग्न बाट बच्ने भनेको दुरी कायम नै मुख्य हो। कोरोना एउटा भाइरस हो। यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने गर्छ। कोरोनाले विशेष गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाउने काम गर्दछ। प्रायजसो यसले श्वास नलिमा आक्रमण गर्ने गर्दछ। कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्दैन, मर्नेहरू प्राय ठूला दीर्घ रोगिनै छन् । जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता न्यून भएको हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा हेर्दा सद्दे देखिने मान्छे मरेको छ भन्ने सवाल हुनसक्छ ! हेर्दा निरोगी देखिएपनि उसलाई भित्री रोग हुनसक्छ। उसको शरीरमा आवस्यक तत्वको अभाव हुनसक्छ जस्ले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गरोस् । गरीबहरूले पैसाको अभावमा शरीरलाई आवश्यक खानेकुरा खान सक्दैन भने धनीहरूले आफ्नो रुचिका कारण।
साथीहरू सकेसम्म रोग लाग्न बाट बचौ! सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, मान्यता प्राप्त सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सर्सफाइमा विशेष ध्यान पुर्याउने, पोसिलो खानेकुरा खाने आदि काम गरौँँ। यदि लागि हालेमा नआत्तिनु अवश्य बिसेक हुन्छ। सङ्क्रमणको सङ्का लागेमा स्वाप परिक्षण गरौँँ। कहिलेकाही लक्षण नदेखिदा पनि कोरोना हुनसक्छ भने कहिलेकाही सङ्का लाग्दालाग्दै नहुन पनि सक्छ। यदि कोरोना लागि हालेमा अवस्था सामान्य छ भने आफ्नै घरमा औषधी ल्याइ सेवन गरेर बसौँ। कोरोनको बिरामीलाई सबैभन्दा ठूलो औषधी आफ्नाआफन्तको हेरचाह र माया हो। विशेष गरी खानपानमा एकदमै ध्यान दिउँ। धेरै असहज भएमा मात्रै हस्पिटल जाउँ किनभने हस्पिटलको अवस्था दयनिय छ। त्यहाँ झन् अर्को रोगले आक्रमण गर्ने सम्भावना हुन्छ । हस्पिटलले पनि थेग्न गाह्रो हुन्छ । श्वास प्रस्वासमा विशेष ध्यान दिउँ । अक्सिजनको धेरै कमि भएमा हस्पिटल जाउँ नत्र घरमानै योग, ध्यान, ब्यायाम, प्रणायम गरौँ।
यदि साथी भाइ आफन्तलाई लागेमा सहज वातावरण बनाइदिउँ। हाम्रो मुस्कान सहितको एउटा मीठो शब्दले उसले मृत्युलाई पराजित गर्ने हिम्मत वृद्धि गराउँछ। बिरामीलाई मन नपर्ने कुराहरू नगरीदिउँ। पोसिलो खानेकुराको ब्यबस्थापन गरीदिउँ। आत्मबल बढाउने सकारात्मक कुराहरू गरीदिउँ। बेला बेला अप्ठ्यारो मानेको छ छैन परिक्षण गरौँँ। परिस्कृत खाले व्यबहार नगरौँ, सामाजिक दुरी कायम गरीसकेपछि सरिहाल्दैन। हामीले परिवारमा सानासाना कुरामा ख्याल गरेनौं भने मानसिकता नकारात्मक बन्न सक्छ। त्यसैले हरेक कुरामा सकारात्मक बनिदिउँ।
स्वास्थ्यकर्मी साथिहरूले माहामारिमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुहुन्छ। सम्पूर्णमा मेरो उच्च सम्मान छ । तपाईंहरूको आखामा शब्दमा बिरामीले आफ्नो जिन्दगी देखिरहेका हुन्छन्। बिरामीको अगाडी के के बोल्ने, कस्तो व्यबहार गर्ने भन्नेमा सबैले विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। तपाईंंहरूको सामन्य त्रुटिपूर्ण कार्यले कसैको ज्यान जानसक्छ। तपाहरूलाई एकजना मान्छे मर्नु समान्य हुनसक्छ तर उसको आफ्ना आफन्तले सबैथोक गुमाउनुपरेको हुन्छ । उसले तपाईंंहरूको विश्वास गरेर आएको हुन्छ कि मर्न दिनुहुने छैन त्यो विश्वासलाई थाती राख्नु पर्छ । तपाईंंहरूको पनि व्यक्तिगत जिन्दगी छैन भन्न खोजेको हैन तर पनि यो माहामरिमा जागीर मात्र नसम्झेर मानवता, नैतिकता तथा आवश्यकताको ख्याल गरीदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। तपाईंंको एउटामात्र रुखो बोलिले बिरामीको आत्मबल नगिरोस्।
सञ्चारकर्मी साथिहरूले गलत समाचार प्रस्तुत नगरीदिनु होला ।पुराना अनावश्यक कार्यक्रम केही समयको लागि हटाई नयाँ सकारात्मक उर्जा मिल्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु होला। बिछोडका गित संगीतका ठाउँमा उत्प्रेरित गर्ने खाले रमाइला मात्र बजाउनुहुन अनुरोध गर्दछु।
सरकारी पक्षहरूले अनुगमनका कार्यहरू तीब्र गरून्। यो अबस्थामा घरेलुु हिंसात्मक घट्नहरू नघटुन्। कसैले मानसिक रोगको सिकार हुननपरोस्। कसैले भोकै मर्न नपरोस्। वृद्ध, रोगी, असहाय, बालबालिकाका विविध समस्या समाधान गरीयोस् । आफुले मात्रै नसक्ने भए युवाहरूलाई सहकर्यका लागि अपील गरी समाजमा अमनचयनको ब्यबस्थापन गरीयोस् ।
आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म एकले अर्कोलाई सहयोग गरौँ। आफुलाई परेको समस्या पनि निर्धक्क राखौं । कसैले पनि यो विषम परिस्थितिमा दुव्र्यवहार नगरौँ। नाजायज फाइदा नउठाउँ। हातेमालो गरौँं, तपाईंं हाम्रो सानो सहयोगले कसैको जिन्दगी बच्न सक्छ। समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा अग्रज व्यक्तिहरू यो माहामारिको बेला घरमानै बस्नु पर्छ भन्ने मानसिकता बनाएर मात्र नबस्नु। समाजमा यतिबेला कसैले भोकै बस्नु परेको हुनसक्छ, कसैले उपचार गर्न जान नसकेको हुनसक्छन्, कसैले हस्पिटलमा पनि उपचार नपाएको हुनसक्छ यस्ता कुराहरूको खोजी गरी निदान गरीनु पर्दछ। तपाईंं हामीले आफ्नो ज्यान जोगाउँदा नमर्ने मान्छे मरेको हुनसक्छ । विकल्पहरूको खोजी गरौँँ। सबैले सहकार्य गरौँँ। आफू बचौ, अरुलाई पनि बचाऔँ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार १४७ जनाले जिते कोरोना
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ९९४ जना संक्रमणमुक्त
पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार २४३ जना सङ्क्रमित निको भए
जनचासो खबर| जेठ २२, २०७८ शनिबार
पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार २१९ जना सङ्क्रमित निको भए
जनचासो खबर| जेठ १९, २०७८ बुधबार
पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना सङ्क्रमित निको हुनेको संख्या ६ हजार ८९८ जना
कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै; निको हुनेको संख्या ६ हजार ४२५ जना
जनचासो खबर| जेठ १७, २०७८ सोमबार